"Umshanelo ngamunye libhubhisa ngendlela yalo" - lesi saga umqondo ezifihliwe mayelana ukuhlukahluka izinhlobo ubuntu abaphathi kanye izitayela zabo ukuphathwa. ukugcina umsebenzi abaphathi ambalwa iqembu ngokucophelela, uzophawula umehluko kumiswa ubudlelwane. Isitayela ukulawula ikhanda kunomthelela oqonde ngqo ku inkampani ukusebenza. Leli qiniso lingasiza uchaze ukuthi kungani ezinye izinkampani sezizophela, kuyilapho abanye siphile futhi siphatheke kahle ngisho nangezikhathi zenhlekelele.
Ubuntu umholi, ukuphathwa izitayela nokusebenza inkampani - lezizinto kuhlobene. Ukuhlanganisa izindlela eziningana ukuze abaqondise, ungathola eduze umphumela ofiselekayo. Phela, umqondisi isitayela nokuphathwa kahle - bangamathe nolimi. Uma umqashi nawe kubalulekile ukuqonda ukuthi lomuntu oyilo ngempela. Ngakho uqonde izimfanelo zakho nobuthakathaka, futhi ingafinyelela imiphumela engcono.
izici Omfushane ubuholi izitayela
isitayela Management - a eziyinkimbinkimbi ukuphathwa ubuhlobo nalabo abangaphansi, kanye nezindlela isinyathelo amaqembu amabili ngokumelene nomunye. Ikhwalithi lezi ubudlelwane kuncike ukusebenza abangaphansi, isimo iqembu nekhono layo ukulandela umgomo walo kanye nezinhloso. Izitayela esihlokweni besibhedlela kungenzeka emihlanu izinhlobo.
Adume German-American sokusebenza kwengqondo kanye umbhali Kurt Lewin ku 30s kwekhulu elidlule futhi ashicilelwe ezikhonjwe izitayela ezintathu ubuholi abaye baba zabuna kamuva. Ngemva kwesikhashana banezela lingahambisani kakhudlwana futhi nesimo. Ngemva kokuhlola etafuleni nge incazelo emfushane umphathi, uzithole uhambe ngqo oyifunayo Ukufundwa sigaba. Futhi kungcono ukufunda yonke impahla - ekuphileni ukubhekana nabantu abahlukene, futhi kungcono uzilungiselele. Yiziphi izitayela ukuphathwa ikhanda, na?
Incazelo emfushane ukuphathwa izitayela
incazelo ikhanda izimfanelo ezinhle izimfanelo ezimbi
kobushiqela Thatha umthwalo, enze izinqumo ngokushesha, usetha ngokucacile Okuqondiwe Akakubekezeleli ukugxekwa, akathandi ukumelana, akacabangi ukwamukela imibono yabanye, bebeka izithakazelo zebhizinisi ngaphezu kwabantu
yeningi Ukusebenza iqembu, ivulekele imibono emisha, acabangele umbono collective ivumela abanye ukuba baqikelele Abaningi Council kungasibambezela isinqumo ingagunyaza ezandleni ezingafanele
Liberal-sokungalalelwa kwemithetho Ayikho ingcindezi ekutheni abasebenzi, isimo nabanomusa eqenjini, evumela indlela yokudala ekuxazululeni izinkinga Livune ubuvila nokonakala ngokokuziphatha ekuphathweni collective kudedela izinso, nokulawula ompofu (ukuntshontshwa sicasulwa futhi ukwehluleka ukwenza imisebenzi)
lingahambisani ayivezi Ayikho imigomo ecacile, akukho imisebenzi ecacile, akukho ukuqonda, ezonakalisa isimo iqembu, aphansi imiphumela, ayikho imali
isimo Eliphezulu nokuphatha abasebenzi, kuyingxenye isimo, uyazi njalo indlela futhi yini okufanele uyenze, akukho ezifuywayo anti-namaqhawe, nokusiza ukuthuthukisa, sikhule abaholi, ukhuthaza indlela yokudala Kuyo yonke le minyaka, babe nesandla esivulekile futhi ilahlekelwa eqhoqhobelele, abasebenzi abonakele ahlale phezu entanyeni, akazi ukuthi ukuze siphumuze ingqondo, umsebenzi "kuze kufike phansi"
abantu kobushiqela (kusukela auctoritas Latin -. Amandla, ithonya) - onamandla, ongamthandi ukuxoxa, ngakho baphikisana, ingasaphathwa inkani. Uma induna libhekisela lolu hlobo lwabantu, kanye umholi nokuphathwa style - kobushiqela. Lolu hlobo kwelinye ezintathu we-classic.
Lesi sitayela umholi ukuphathwa - kobushiqela - ulungisiswa ezimweni ezicindezelayo: izimpi, usizi, izifo nokunye, ngoba umuntu onjalo sithathe isinyathelo ngokushesha futhi esiletha wemfanelo. Ngo ukhuluma ezinzima ongagunci. abaholi kobushiqela siyiswa ezisezikhundleni eziphakeme kunazo zonke zikahulumeni kanye ngempumelelo kubuyise isikhundla. Lesi sitayela ubuholi isakazeke eRussia ngokwezinga elikhulu kunabanye. Lokhu kungenziwa ngempela ukulungisiswa izinkampani ezinkulu, izimboni, amaqembu ubuciko ibutho. Sizongena ukuthenga noma ukuxoxisana eyenziwa kwimodi kanzima, emkhathini, inhliziyo-ishaya ngamandla ukuze umkhawulo.
Umholi kobushiqela uhlanganisa bonke amandla ezandleni zakhe futhi akavumeli muntu ukuba kungenele ngisho ingxenye yayo. Abangaphansi uvalwe elawulwa futhi njalo ukudlula nokuvivinywa okuhlukahlukene. Kodwa isitayela kobushiqela sehlukaniswe onobuhle ezimbili: i-ukuxhashazwa kwabasebenzi futhi nonomusa.
"Exploiter" ufaneleke ngokugcwele igama layo, kungcono kwesokudla, "Pablo Escobar" kule nkampani. Lokhu umphathi ekucindezela zonke juice aphume abangaphansi kwakhe, izithakazelo abantu akacabangi umbono wothile ngokuphelele akusho uzomthakazelisa. Kusukumisa abasebenzi izinsongo, ukusabisa, izinhlawulo kanye nezinye ukushushiswa.
Ungalokothi uvumele ngisho ukuzimela kancane ekwenzeni izinqumo noma imisebenzi. Konke kumele kwenziwe ngokufana ncamashí wathi "exploiter". Noma yimuphi umholi kobushiqela njalo ishicilela oda, izimiso kanye neminye imithetho. Konke selinqunyiwe, imidwebo kanye nezinsuku. Endabeni imisebenzi kukhona ngikhetha ngokweqile kakhulu futhi azinaso isineke, noma ukwazi ukwenza imvume, uma engekho ngaphansi imizwa. Uma umphathi alikho zomoya, uyanikela ungasho futhi ukwenza lutho, bese awukwazi ukulinda axolise. Akufanele ukudida lokhu kuziphatha ne ekuhhunga lapho bonke mizwelo nje "yaseshashalazini" - abaholi kobushiqela uthanda ukuyisebenzisa. Abangaphansi abakwazi ukuthatha isinyathelo.
"Benevolent" ukulawula isitayela ikhanda ulungisa isimo nje yokwamukela ngaphezulu, uma kungenziwa ngokuthi ngakho. umholi onjalo abathanda ukubuka kwe abangaphansi, kodwa angasebenza bebodwa, ngisho noma kwasikiselwa ilungelo. Ngokuvamile, lokhu ikhanda zokuxhumana abangaphansi Ukuzehlisa 'zoyise ", angazwelana, kodwa ezomile futhi nje okwesikhathi sesibili, bese uwakhumbula ngokushesha ukuthi inceku manje emsebenzini, futhi okuhlangenwe nakho kwakhe azinandaba. Ungacabangi ukuthi imodeli wesibili wehlukile ngowokuqala - nazo zonke unomusa yakhe namanje umholi kobushiqela: kanzima, imperious nekhathazayo.
Noma yimaphi kula typecasting othanda ukufunda nokubhala, izimpawu, ukunyathelisa, imidwebo, izifinyezo kanye nema. Konke lokhu kufanele ibe yinkulu, ngokugqamile, lombusi. Laba baholi singabantu Paranoid ubuntu iphethini - amandla ezazilambile beprintsipnye nokungabathembi. Ngokuvamile yomsebenzi abangakwazi ukuphumula, onothando futhi bakwazi ukuphoqelela imibono yabo futhi intando abanye.
Uma ubuhlobo abangaphansi umholi "onomusa" yakha ibanga ukuthi akukwazi umuntu adabule, ukuthi "nokuxhaphaza" ibanga iba intergalactic. mandative Talk eyakhelwe isesimweni anolaka. Abasebenzi ukuyiveza bancishwa ugqozi, nengozi eliphezulu ukuthuthukiswa ukungqubuzana kule nkampani. Ukugxekwa, ngisho ezakhayo, akanjalo umqondo.
Cela umholi enjalo uqobo Akudingekile umoya, futhi kuyafaneleka - "Pablo Escobar" wayengafuni ukwazi abangaphansi, futhi ukucabanga ngobunzima abasebenzi babo - nakakhulu. Ithuba uthole into ngisho ibhizinisi cishe zero, uma autocrat yena sasixoxa ngakho. Futhi uma ayeshilo ngaphambili, ukuthi enquma lapho, kubani futhi yini ukuthola. Incazelo phikisana engenamsebenzi - ke ine ukuqina kakhulu ezingxoxweni kanzima, futhi ungaphansi wakhe hhayi ukukhuluma. Uma leso sigqila uzoqhubeka ukugcizelela ke ngokushesha uthola okuhle noma ukhuze, futhi ngesikhathi esifanayo kusadingeka ulandela imiyalelo. Emote phambi umholi onjalo kuyize - ngeke sibheke umuntu njengoba ekhaphethini. Uzwela-zero.
"Benevolent" uhlobo kungenzeka ukulalela kumuntu ophansi, kodwa kuyodingeka uye ngqo kukhasi iphuzu futhi musa donsa iraba, ngaphandle kwalokho konke - "Isikhathi sakho phezulu," futhi umbuzo wakho kuyoba ukuthola kuphela ekuphileni okulandelayo. Kwenzeka ukuthi umphathi bangakunikeza iseluleko ngisho. "Benevolent" kungase kunikeze ikhefu, Ukuhamba ibhizinisi esiphuthumayo, noma ukukhangwa kunamekwe - kodwa udinga "ukuvikela" kubo ngaphambi kokuba uhlelo yabo ukuthengisa kwakhe umbono mayelana nokuthi kungani kufanele sikwenze kuwe. Kodwa ngisho noma senza konke lolungenamaphutsa, kukhona ingozi enkulu ukuthi umphathi uzokwenza ngendlela yabo, futhi ukuthola izizathu ezibhalwe phansi ngesinqumo engenakwenzeka.
I "exploiter" futhi "onomusa" yonke into ilula - wonke umsebenzi ngaphandle kokuphumula futhi kumele aphambane futhi nokumfela ukuze kuzuze ibhizinisi. Labo ningavumelani nalokhu, kuthiwe "bayizitha zabantu" futhi kufanele ngiyeke enkampanini.
Abangaphansi kumele kuhambisane nezimiso besprikoslovno. I ngokushesha futhi kangcono ukufeza imithwalo yemfanelo, uyophumelela inkampani ufuna. Futhi amaningi amasha izinkinga autocrat walala emahlombe abangaphansi kwakhe. Ekuxazululeni izinkinga abaholi kobushiqela abanalo izimiso - ekupheleni olungisisa izindlela. Kufanele kukhunjulwe, ngoba kulapho ezingeni ithonya autocrat, kwakuya kuba nzima uyothatha isinyathelo.
Ngalezi abaphathi ukudlala futhi ubonise ukuziphikisa akufanele kube - ukubona ngokusebenzisa ngokushesha. Ake hhayi namuhla, kodwa kusasa, futhi ngisho nangalesosikhathi kungabi kuhle. Oceba autocrat uyazi wezindlu zonke ka Cardinal uRichelieu, ukuze kule isiqondiso akudingekile ukuncintisana. Ngendlela mncintiswano - a kobushiqela mkhuba (futhi Paranoid kakhulu) indoda, kangcono hhayi ukuma endleleni yakhe. Kungani? Ngoba awekho iziqondiso, ukufeza umgomo i autocrat ufaneleke nganoma iyiphi indlela. Imizamo iziphakamiso behluleka - the autocrats null isiphakamiso. Kuhle indlela - nokubambisana. Njengoba ukuphila ukusebenza ayozithola kalula, futhi emkhathizwe kuyoba ithuba ekukhuleni umsebenzi. abaholi Izibonelo: Donald Trump, Iosif Stalin, u-Adolf Hitler.
Isitayela umsebenzi kanye nokuphathwa kwe-inhloko Democrat esibukweni zihluke kobushiqela. Lesi sitayela msebenzi uhilela sokusabalalisa umfaniswano imisebenzi phakathi izisebenzi zale nkampani. Inhloko Democratic ebutha iqembu ababeholwa, ungathembela. Ithimba ukuthi ukuzixazulula izinkinga bese uyagijima ngisho amaphrojekthi eziyinkimbinkimbi kakhulu, futhi ayidingi ukumphoqa noma ukwesabisa abasebenzi. Isibopho usazoba, ngoba intando yeningi - akuyona ovulekile-zokuvumela noma yini umuntu nomqondo, nenhloko, okuhloswe ngaso yi ethize.
Abaphathi Democrats futhi sifinyelele phezulu kakhulu kwezamabhizinisi kanye nezombusazwe, kanye kobushiqela. they yodwa ukudala ngaphezulu umoya nonomusa ngaphandle autocrats.
IDemocratic Abantu gravitate ngesitayela izimfanelo eqinile okuhola, kodwa ngaphandle kokugqoka kwasekuqaleni akhe ego. Umholi weDemocratic - kuba iqhawe elinokuthula: ungaqali impi yokuqala, kodwa uma ehlaselwa, kufanele ube wemfanelo ngokugcwele yomthetho. Lesi sitayela ukulawula ikhanda kudala wobungane kule team futhi usiza abasebenzi ukuba nginakekele isixazululo yezinkinga ethile lokusungula. Umholi esinjalo singamelana kungabikhona izimangalo ekhethekile cabangela isikhathi sokungabi khona emsebenzini, noma ukusiza ukuthenga imishini emisha ye inkampani. Uma imibono yakho noma izicelo ukunikeza base ubufakazi, inhloko kungenziwa wathonyelwa ukuba zamukele isinqumo omuhle udaba lwakho.
Songa friendly ubuhlobo ibhizinisi ezingaba ageleze ngendlela enobungani, nakuba lokhu ezingavamile. Kungakhathaliseki izitayela ukuphathwa ikhanda, ungakhohlwa ukuthi ikhanda lakho, akudingeki ukuba bawele emigqeni. Shona-Democrat isebenzisa indlela ngenhlonipho ukuba abangaphansi, ifakwa isimo sabo umkhawulo othile, kalula wanelisekile imincintiswano okwashiwo noma izipho ngokubekezela ukugcwaliseka plan.
Okuhle kunakho konke ukuthi abantu nale style ukuphathwa uzizwe ezikhundleni maphakathi no-level, ezifana inhloko yomnyango noma ikhanda besifunda edolobheni. Ngisho i kobushiqela ukuphathwa isitayela inkampani, iminyango elekhanda Democrat eba "nomkhathi wawo siqu" - kulesi simo igunya kwenhloko yomnyango ingaphezu kwe-ikhanda kwenhlangano.
Kulaba minuses kungenziwa waphawula lokhu okulandelayo: Democrat ungadlala eside kakhulu "umngane", bese abaningi ngokuvamile kuyovela izingxabano nezimo ukungqubuzana, esikhundleni sokusebenza. ukugxila shift kuphumelelisa tinhloso bagxila izisebenzi engalethi ithimba ukuba afinyelele imigomo. Shona-Democrat kulokhu ilahlekelwa ukuthembeka kanye nezinga umthelela iqembu, kodwa unamandla up sleeve yakhe usazoba ibhonasi ngesimo inhlawulo noma i-oda, nakuba laba babusi abangamaqaba akuvamile ukuyisebenzisa.
Tinkinga tetibalo wukuqinisekisa ukuthi imizamo yokuqala lilonke uhlelo senzo. Ngemva kwalokho, nabadlali akhethiwe ikhumbula namakhono. Ngaphandle kwale umholi ukumelana umema ngaphandle uchwepheshe ithimba alalele imibono yakhe. By the way, ukuveza imibono yabo kunoma ababeholwa sakhe singasuki kungavunyelwe, ngoba ikhanda ukhathalela Imiphumela ophumelelayo uyaqaphela ukuthi izingozi ulahlekile okuthile okubalulekile.
Lapho uhlela izinto ngokuya izinkinga ukusebenza, inhloko uhlelo Democratic kubeka ku isitokwe ngokuhamba kwesikhathi, ngoba uyakucabangela amathuba amaphutha izisebenzi, futhi usadinga isikhathi ukuze uziqede. Uma ngokuhamba umsebenzi zikhona nobunzima noma kungenzeka ukwenza konke ngendlela ehlukile, inhloko rearranged ngempela kalula isimo, nakuba akusiyo wamukelekile kakhulu.
INhloko Democrat ekhetha esiku yokukhulumisana. Kuye, ungaya ehhovisi futhi "ukweba" kancane isikhathi. Uyakulalela ukubukwa kwabasebenzi, ikakhulukazi uma amagama usekelwe amaqiniso nezibalo - ke kufanele usebenzise. Akubalulekile ukuba siqhubekele phambili umholi onjalo - nakuba eneminyaka elithambile, kodwa egoba efana loqalo, futhi uma eqile, kuyobe aphendule sina. Kungakhathaliseki umphathi, izitayela kanye nezindlela zokuphatha iyohluka kakhulu. Indlela engcono kakhulu ukuxhumana - nokubambisana. Kumelwe senze izinto kohlaka umsebenzi, ngaphandle kokuphula imigomo. Uma ungakwazi ngcono noma ukushintsha umsebenzi - udinga ukuya ngqo ekhanda, uyigcine unolwazi. Izibonelo ngabanye: uVladimir Putin, Yevgeny Chichvarkin, Lavrenty Beria.
Lesi sitayela ukuphathwa kufana yeningi, kodwa kunomehluko. Akumangalisi ukuthi ikhanda, ukubeka inkinga ngokucacile futhi ngokuqondile ecacisa isikhathi nesivinini kokubulawa, zize kamuva. Ngakho, ivumela abangaphansi ukuzenzela umathanda, futhi cishe kungagcini elungiselelweni nezindlela imisebenzi.
isitayela Liberal kufanelekile nokuphatha amaqembu zokudala. Akubalulekile ukuthi kuyoba kakhulu ukucula nokudansa ithimba, akhuphuke abahleli, kanye namahhovisi design, kanye namanye amaqembu afanayo.
isitayela Liberal zingahlukaniswa zibe izindawo ezimbili: anarchist kanye namakhono. Esimweni sokuqala ikhanda ibuthakathaka ngokwemvelo umuntu, hhayi uphikise, a conformist. Washiya ezibaluleke kuze kube ngomzuzu wokugcina, noma ukuzama ecaleni ngokuphelele ngokwabo zemithwalo yemfanelo eshintshashintshayo ke ungene emahlombe amasekela noma abangaphansi. Umholi esinjalo singamelana ahlale izinsuku ehhovisi futhi musa ukuya abasebenzi - uzivumele ukusebenza.
Uhlobo lwesibili kuyinto ekahle indima uchwepheshe noma umphathi isivakashi imisebenzi yesikhashana - ke anike ticondziso kanjani futhi yini okufanele uyenze, kanjani futhi ngasiphi isikhathi uzimele. Ezinye izindaba zika-msebenzi ngeke uqhubeke, ke ukudansela isiginci sakhe abangaphansi hhayi kuphela lapho isimo ephumile control. Igunya kugcinwa ezingeni ubuchwepheshe yayo, ulwazi kanye nokukwazi e umsebenzi wamanje.
Ngo uchwepheshe ovulekile-added friendly, kuchumana ngalokungakahleleki nehlala njalo ubuhlobo. Ngo kukahulumeni onjalo sikhule abaholi ke yokwehlisa amandla kude nesandla esivulekile, noma ukuya amaqembu amasha - njengoba umkhuba imibukiso, lokhu abaholi kobushiqela.
Ngo umsebenzi abangaphansi Shona ovulekile cishe kungaphazamisi ukuhlinzeka ukuthi inkululeko enkudlwana okungenzeka senzo. Ongaphansi inikeza ulwazi, amathuluzi, ukuqeqeshwa sokuyalela, iyaligodla ilungelo isinqumo sokugcina.
Ungacabangi ukuthi umholi Liberal wawuhlala ulalele "igobolondo" yakhe futhi ungabonisi ekhaleni lakhe. Kwenzeka, kodwa akuchazi bonke abaholi Liberals. Ngakolunye uhlangothi, okwandisa ukuthandwa le ndlela abantu ukuphathwa isimo samanje. Lena obonakalayo ikakhulukazi imikhakha yesayensi, kwezobuciko noma ezinye lapho lizinga lelisetulu lelwati, ikhono nesipiliyoni - Uchwepheshe abaqeqeshiwe ungeme ebuhlotsheni isigqili sakhe, kanye ukunakekelwa ngokweqile.
Ngo "umqondisi Iinhlangano" ubudlelwane, "ngomqondo ovulekile" ukuphathwa izitayela ezingafaneleki eyaziwayo. Soft ukuphathwa, ithemba, ukubambisana kanye - lawa eziyisisekelo zokubala emkhakheni we isitayela ovulekile we ukuphathwa inkampani. Yeka indlela ukuze alawule abantu, kukhona kuphela ukusetshenziswa okungalungile amathuluzi ezandleni zabo. Ukunqunywa inhloko isitayela ukuphathwa kufanele uqale kusenesikhathi - ngakho-ke kuyoba lula sijwayele indawo noma ngokushesha ukuthola umsebenzi omusha.
Inhloko ovulekile akusho unamathisele ukubaluleka kakhulu indlela ekhethiwe yokuxhumana, ngoba umthelela lokhu ku umphumela esiphansi. Kusukela ekhanda kufanele ukuxhumana ngesisekelo Izinjongo ukuxhumana futhi engumuntu onjani ngasekhanda. ukuphathwa izitayela ngesikhathi esifanayo zingahluka - noma anarchist noma uchwepheshe. Hhayi ubaluleke kakhulu kangakanani, asikho isidingo sokukhathazeka uma ngokungazelelwe ngokuthi inhloko "wena" - ilungisa, kodwa musa jezisa nge ocolekileyo njengomnikelo kobushiqela. Izibonelo: Stiv Dzhobs, Roman Abramovich, Robert Kiyosaki.
Igama liyazikhulumela - ukulandelana kanye logic ezenzweni zayo lapho. Shona okunjalo ihamba komunye ukulawula kwenye isitayela, kodwa zikwenza lokhu ukuze ngu nalwazi, futhi lokhu kuhluke kanjani endleleni isitayela isimo.
Namuhla, umphathi umholi kobushiqela enjalo, futhi kusasa - i anarchist nge athuthukile imvelo zokuyekelela umsebenzi. Imiphumela iqembu elinjalo liphansi kakhulu, futhi kukhona zonke ithuba konakalisa umsebenzi ibhizinisi, noma ngisho niwuchithe. Uma inhloko noma yimuphi umuzwa kokuthunyelwe ezinjalo, kodwa ithobela isitayela lingahambisani umsebenzi, kungashiwo ngokuthi suggestible, ababuthakathaka sengingene umphathi, abangakwazi ukufeza izinhloso.
Esiguqukayo team leader awujabuli imenenja yakhe akusho ukuthi yini okufanele uyilindele kusuka ekhanda, ngaphezu kwazo zonke wavuma ukucabanga umgomo oyinhloko kanye namathuba ayo ukukhula. Ubudlelwano bayatfutfuka ngokujulile kakhulu, konke lokhu kubangela ukwenyuka emkhathini ongathandeki ithimba. Kuyinto amahloni kungenzeka kakhulu, usongo nechilo.
Ukufinyelela Imigomo elekhanda akunakwenzeka, ngoba awuzwakali, efana iqembu kufanele asebenze. kusombulula tinkinga tetibalo is elivulela zamaphini nalabo abangaphansi, bese ethatha izintambo. Khona-ke, ezinye imisebenzi kukhanselwa, indawo abasanda, nokunye. Lesi sitayela umphathi ukuphathwa sidala ukudideka nezinxushunxushu.
esifanayo ngokubikezela izinto ezididayo nezingathembekile incike eziyimbangela kule nkampani kanye nemizwelo boss. Namuhla ongamtshela izindaba mayelana ayihlala indlela ngempelasonto, futhi kusasa ukudlala indima kobushiqela "Pablo Escobar". Ongaphansi ekuthuthukiseni ubuholi namakhono nolukhohlisayo uyakwazi unaphakade engasiphazamisa umholi lolo. Bese kusuka kusofa lakho siqu. Izibonelo: abantu abanjalo akuvamile ukuphumelela eziphakeme sina, kodwa isibonelo esivelele sisekhona - uMikhail Gorbachev.
ukuphathwa isitayela, lapho inqubomgomo ubudlelwane uvuma isimo samanje, ibizwa ngokuthi isimo. Lena indlela engcono kakhulu ukuphatha wabantu namabhizinisi - lapho besekuhluphekeni kusiza ukuba abuthe futhi uqinise ezinephaliswano elihle kuyanda emakethe.
Musa ukudida indlela isimo esinjengalesi ukuziphikisa ikhanda. Esimweni sokuqala, induna ekhetha isitayela yokuxhumana esekelwe ukuziphatha umuntu othize noma iqembu labantu, ukuze kwenyuswe izinga isiqalo umsebenzi. Esimeni sesibili, induna kuthatha izikhundla ezahlukene ngesisekelo izinzuzo zayo.
Benziwa abaphathi oseneminyaka engu abasebenze ngaso ezihlukahlukene amazinga abaphathi ezindaweni eziningana. Kwezinye amakhono abantu ukuphathwa ezabekwa nemvelo - okubizwa ngokuthi abaphathi ezivela kuNkulunkulu. Kodwa ithalenta esikhundleni ukuqeqeshwa intshiseko njalo. Ukwazi kanjani namuhla zithinta umuntu iza nakho. Lena enye yezindlela eyamukelekayo kakhulu ukuphatha iqembu. Lapho imizamo nokuwubuwula ukukopisha isitayela kunengozi ukuthi inhloko bayakuphendukela noma yiliphi ithuba elivelayo ubani osho elusizo okwamanje.
Kungezwe ngokuqiniseka, obala futhi kalula - ngokuhlanganyela njalo wokuthi umsebenzi basuke ngokoqobo evutha kwezandla ekhanda uyazi njalo ukuthi yenzeni, kanjani ukuze ajezise futhi bajabule iqembu. Ngenxa isipiliyoni esikhulu badosiphambili abanjalo ukukwenza uma bebona ngokusebenzisa abangaphansi kwakhe futhi babe izinto kusengaphambili. Yilezi izinhloko wegunya ngokuhlanganyela.
Umholi situational iyakwazi ukuxhumana kangcono naleli qembu ababeholwa noma ongashadile. Kungenzeka kanjani ukuba athule noma ngisho into ukubekezelela, kodwa lokhu nje nhla ongenalwazi kubonakala sengathi umholi lwakhipha nokunensa.
Ukuxazulula ingxabano, nezindaba kanye nezinkinga kuyashesha futhi professional. Umholi abanolwazi ukwazi ngokushesha esihle kutsha iningi izinqubo umsebenzi, futhi uma kwenzeka of force majeure, abantu abamiswe ukuba alungise leso simo, esekelwe ikhono nokuhlangenwe nakho kwezisebenzi, kunokuba esikuthandako.
Imenenja yena ngaphezulu zinjengethunzi - efihla yakhe yangasese futhi uyathinteka kuphela umsebenzi. Izilwane ezifuywayo akasafuni, futhi uma kukhona, kungaba isikhathi eside ukuba who waklonyeliswa lo msebenzi. engemihle obala alibonisi, kunalokho, kwaba yilowo umsebenzi inkinga umphathi lizama ukuthola ulimi ezivamile. Ngenxa isipiliyoni ngokuvamile kungenzeka. Kubonakala sengathi umuntu ezinjalo ngaye akusho ucabange: lapho benza zonke "lwezifiso" nezinye izinhlelo? Lo mbuzo kuphela umphathi isimo ngeke smile futhi uvume wakhe.
Akuvamile has umphathi okunjalo akukhona Bani ezibulala ngomsebenzi.
Njengoba Liberal uchwepheshe umphathi nesimo ekhetha isitayela elula yokuxhumana. Naphezu ezinegunya, abantu abanjalo elula ovulekile futhi babenethemba lokuhle futhi ngokuvamile benawo enamancoko. Ngokuvamile beza isikhundla isisebenzi kungasiza, becabangela okungale kwalokho ubudlelwane. Njengoba bekhula, abaphathi mahle kakhulu, futhi kushwelezwe kalula, ngezinye izikhathi ulahlekelwe ukubamba kuka ayizisebenzi abangathembekile. Kodwa iqembu ngokuvamile imele ngokuqinile inhloko, futhi uma bebona meanness ngase abavikela wakhe, khona-ke ngokushesha ukuthatha isinyathelo.
Izibonelo: iningi lempi, abaqondisi kanye nezimenenja izimboni kanye nezimboni ka ezempi kanye inkathi post-yimpi, ezifana Konstantin Rokossovsky, Ivan Romazana, Avraamiy Zavenyagin nabanye.
Inhloko isitayela nguwe?
Indlela wena noma kwaholela umphathi, kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi umuntu umholi nokuphathwa style siqukethe izici imfundo kobuntu, sicile tags akudingekile.
NokuBusa njengoba ukugcwaliseka isitayela ngabanye ikhanda - inqubo eyinkimbinkimbi futhi enezici, ephelezelwa namazinga aphakeme okucindezeleka ngenxa, nemvelo ngokwengqondo nangokomzimba umthwalo. Lokuba umholi kuthatha isikhathi, kuthatha isikhathi esiningi namandla engeziwe, lihlotshaniswa kubangele izingozi ezinkulu. Ngakho-ke kudingeka nokuxhaswa izinhloko ezingeni eliphakeme, futhi imfundo eqhubekayo.
Yini okumele uyenze uma uzithola kulolu hlu? Thatha izimfanelo zakho ukugxila oluqinisayo nokuthuthuka kwazo. Ubuthakathaka kufanele basingatha eside - zinkinga amaphuzu sokukhula. Ngokushesha aphinde acabange isimo sabo maqondana nemikhuba emibi, i-ngokushesha futhi kangcono kuwe kwenzeke ukuvela njengoba umholi.
Okufanele ukwenze uma uthola ikhanda lakho ohlwini? Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela yokwakha ubuhlobo kangcono naye, futhi yini izici kufanele kugwenywe.
Izigwaca mnandi. zokupheka